अध्याय १०९ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
प्रत्येक दिन म वाणीहरू दिइरहेको हुन्छु, बोलिरहेको हुन्छु, र मेरा महान् चिन्‍ह र अचम्‍मका कामहरूको खुलासा देखाइरहेको हुन्छु। यी सबै कुराहरू मेरो आत्माको कार्यमा समावेश हुन्छन्। मानिसहरूको नजरमा, म एक मानव मात्र हुँ, तर ठ्याक्कै यही मानवमा म मेरा सबै कुरा साथै, मेरो महान् शक्तिको खुलासा गर्छु।
मानिसहरूले मेरो मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गर्ने र मेरो कार्यहरूलाई ध्यान नदिने भएकाले, तिनीहरूले यी कुराहरू मानवले गरेका हुन् भनेर अनुमान गर्छन्। तैपनि, मैले जे हासिल गरिरहेको छु त्यो मानवले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एकछिन रोकिएर तँ किन सोच्दैनस्? मानिसहरूले मलाई यो हदसम्म चिन्दैनन्; तिनीहरूले मेरा वचनहरूलाई बुझ्दैनन्, न मेरा कार्यहरूलाई नै बुझ्छन्। दुष्ट, भ्रष्ट मानिसहरू! म तँलाई कहिले निल्नेछु? म तँलाई कहिले आगो र गन्धकको कुण्डमा पुर्नेछु? तिमीहरूको समूहबाट म यति धेरै पटक अलग्गिएको छु, मानिसहरूले मलाई यति धेरै पटक अपमान, उपहास, र निन्दा गरेका छन्, र मानिसहरूले मलाई खुला रूपमा यति धेरै पटक न्याय र विरोध गरेका छन्। अन्धा मानिसहरू! तिमीहरू मेरो हातमा भएको एक मुठ्ठी हिलो मात्र हौ भनेर के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू मेरो सृष्टिको वस्तुहरू मात्रै हौ भनेर के तिमीहरूलाई थाहा छैन? मेरो क्रोध अहिले प्रकट हुँदैछ, र कसैले पनि यसको विरुद्ध प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन। मानिसहरूले कृपाका लागि बारम्बार याचना मात्रै गर्न सक्छन्। तर, मेरो कार्य यो हदसम्म अघि बढिसकेको हुनाले, यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। सृष्टि भएकाहरू हिलोमा फर्कनुपर्छ। म अधर्मी भएकोले होइन, तर तिमीहरू अति धेरै भ्रष्ट र हिंस्रक भएर हो, र तिमीहरू शैतानको कब्‍जामा परेर यसका साधनहरू बनेकाले हो। म पवित्र परमेश्‍वर स्वयम् हुँ; म अशुद्ध हुन सक्दिन, न त ममा अशुद्ध मन्दिर नै हुनसक्छ। अब उप्रान्त, मेरो प्रचण्ड क्रोध (क्रोधभन्दा अझ धेरै गम्भीर) सबै राष्ट्र र मानिसहरूमा पोखिन थाल्नेछ र मबाट आएका तर म को हुँ भनेर नचिन्‍ने ती सबै नीचहरूलाई सजाय दिन थाल्‍नेछ। म मानवलाई एकदमै धेरै घृणा गर्छु, र मसँग थप कृपा हुनेछैन; बरु म मेरा सबै श्रापहरूको वर्षा गराउनेछु। अब थप करुणा र कृपा हुनेछैन, सबै कुरा जलेर शून्यतामा परिणत हुनेछन्, र मेरो राज्य मात्रै बाँकी रहनेछ, ताकि मेरा मानिसहरूले मेरो घरमा मेरो प्रशंसा गरून्, मलाई महिमा दिऊन्, र सदैव मेरो लागि हर्षबढाइँ गरून् (यो मेरा मानिसहरूको कार्य हो)। मेरो हातले मेरो घरभित्र र बाहिर रहेका दुवैलाई आधिकारिक रूपमा सजाय दिन सुरु गर्नेछ। कुनै पनि दुष्कर्मी मेरो पकड र न्यायबाट उम्किन सक्‍नेछैन; सबै जना यो कठिन परीक्षाबाट भएर जानुपर्छ र मेरो आराधना गर्नुपर्छ। यो मेरो प्रताप हो, यसका साथै, यो मैले दुष्कर्मीहरूका लागि घोषणा गर्ने प्रशासनिक आदेश हो। कसैले पनि कसैलाई मुक्त गर्न सक्नेछैन। मानिसहरूले आफूले आफूलाई मात्रै हेरचाह गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले जेसुकै गरे तापनि, तिनीहरू मेरो सजायको हातबाट उम्किन सक्नेछैनन्। यसलाई मेरा प्रशासनिक आदेशहरू कठोर हुन्छन् भनेर भन्नुको कारण यहाँबाट खुलासा भएको छ; यो सबै मानिसहरूले आफ्नै आँखाले देख्न सक्ने तथ्य हो।
जब म रिसाउन थाल्छु, ठूला र साना सबै भूतहरू मेरो हातले तिनीहरूलाई आक्रमण गरी मृत्यु दिनेछ भनेर एकदमै डराएर, उथलपुथलमा भाग्नेछन्—तर मेरो हातबाट कोही पनि उम्किन सक्नेछैनन्। म सजायका सबै साधनहरू मेरो हातमा बोक्छु; मेरो हातले सबै कुराको नियन्त्रण गर्छ, सबै कुरा मेरो पकडभित्र छ, र कोही पनि उम्किएर स्वतन्त्र हुन सक्दैन। यो मेरो बुद्धि हो। जब म मानव क्षेत्रमा आएँ, मैले मानवको बीचमा मैले गर्ने मेरो कामको लागि जग बसाल्दै तयारीका कामका सबै तरिकाहरू पूरा गरिसकेको थिएँ (किनभने म बुद्धिमानी परमेश्‍वर हुँ, र जे गरिनुपर्छ र जे गरिनु पर्दैन त्यसलाई म उपयुक्त तरिकाले निराकरण गर्छु)। सबै कुरालाई उपयुक्त ढङ्गले मिलाइसकेपछि, म देह बनेँ र मानव क्षेत्रमा आएँ। तर, मलाई कसैले पनि चिनेन। मैले अन्तर्दृष्टि दिएकाहरू बाहेक, विरोधका सबै पुत्रहरूले मेरो विरोध गरे, मेरो अपमान गरे, र मलाई शत्रुवत् व्यवहार गरे। यद्यपि, अन्त्यमा, म तिनीहरूलाई शिष्ट र समर्पित बनाउनेछु। मानवलाई मैले धेरै काम गरिरहेको छैन भन्ने लाग्न सक्‍ने भए पनि, मेरो महान् कार्य भने पहिले नै सकिएको छ। (मानिसहरूले मेरो मानवतालाई वचन र हृदय दुवैमा पूर्ण रूपमा आज्ञापालन गर्छन्; यो एउटा सङ्केत हो)। आज, म उठ्छु र मेरो विरोध गर्ने सबै दुष्ट आत्माहरूलाई सजाय दिन्छु। तिनीहरूले मलाई जतिसुकै समय पछ्याएको भए तापनि, तिनीहरूले मेरो साथ छोड्नुपर्छ। मेरो विरुद्धको कसैलाई म चाहँदिन (तिनीहरू ती हुन् जसमा आत्मिक बुझाइ छैन, जसलाई दुष्ट आत्माहरूले अस्थायी रूपमा अधीनमा राखेका छन्, र जसलाई मेरो बारेमा ज्ञान छैन)। मलाई तिनीहरूमध्ये एक जना पनि चाहिँदैन! सबै जनालाई हटाइनेछ र विनाशका पुत्रहरू बन्नेछन्! आज मेरो सेवा गरेर, तिनीहरू सबै जानुपर्नेछ! मेरो घरमा आलटाल नगर्; तेरो निर्लज्ज भई सित्तैँमा लिने प्रक्रिया बन्द गर्! शैतानका सबै मानिसहरू दियाबलसका पुत्रहरू हुन्, र तिनीहरू अनन्तको लागि विनाश हुनेछन्। मलाई विरोध गर्नेहरूले चुपचाप मेरो साथ छोड्नेछन् ताकि मेरो कामको गतिमा अलि कम बाधा पुगोस्, थप बाधा नहोस्। यावत् थोक कुनै बाधा वा अड्चनविना मेरो हुकुममा चल्‍नेछन्। मेरो नजरको अगाडि सबै ढल्‍नेछन् र मेरो दाहमा विनाश हुनेछन्। यसले मेरो सर्वशक्तिमान्ता र मेरो सिद्ध बुद्धिलाई (मैले मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूमा गरेको कुरा) देखाउँछ। यसले मेरो नाममा महान् महिमा थप्नेछ, र यसले ममा महान् महिमा थप्नेछ। म जे गर्छु र मेरो आवाजको ध्वनि जस्तो छ त्यसबाट, तिमीहरू सबैले मैले मेरो घरमा काम सकाएको छु, र गैर-यहूदी राष्ट्रतिर अभिमुख हुन सुरु गरेको छु भनेर देख्न सक्छौ। म मेरो काम यहाँ सुरु गर्दैछु, र मेरो कामको अर्को चरण सञ्चालन गर्दैछु।
मेरा धेरैजसो वचनहरू तिमीहरूको धारणाहरूसँग मिल्दैनन्—तर नजाओ, मेरा पुत्रहरू। तिनीहरू मानव धारणाहरूसँग मेल खाएनन् भन्दैमा ती मेरा वाणीहरू होइनन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। यसले मैले नै ती बोलेको हुँ भन्ने कुरालाई ठ्याक्कै प्रमाणित गर्छ। यदि मेरा वचनहरू मानव धारणाअनुरूप हुन्थे भने, त्यो दुष्ट आत्माहरूको काम हुन्थ्यो। तसर्थ, तिमीहरूले मेरो वचनहरूमा थप प्रयास गर्नुपर्छ, म जे गर्छु, त्यो गर्नुपर्छ, र मैले प्रेम गर्ने कुरालाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो अन्तिम युग भनेको सबै विपत्तिहरू फेरि उठ्ने युग पनि हो र, यसका साथै, यो मैले मेरा सारा स्वभावहरू खुलासा गर्ने युग पनि हो। जब मेरा सबै पवित्र तुरहीहरू बज्न थाल्छन्, मानिसहरू साँच्चै डराउनेछन्; त्यो समयमा, दुष्ट काम गर्न कसैले साहस गर्नेछैन, बरु तिनीहरूले मेरो सामु, मेरो बुद्धि र सर्वशक्तिमान्‌ताको प्रशंसा गर्दै साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्नेछन्। आखिर, म बुद्धिमानी परमेश्‍वर स्वयम् हुँ! मलाई कसले खण्डन गर्न सक्छ? मेरो विरुद्ध खडा हुने साहस कसले गर्न सक्छ? मेरो बुद्धिलाई अस्वीकार गर्ने साहस कसले गर्न सक्छ? मेरो सर्वशक्तिमान्‌तालाई नचिन्‍ने साहस कसले गर्न सक्छ? जब मेरो आत्माले सबै स्थानमा महान् काम गरिरहेको हुन्छ, सबैलाई मेरो सर्वशक्तिमान्‌ताको बारेमा थाहा हुन्छ, तर मेरो लक्ष्य अझै भेटिएको हुँदैन। मेरो क्रोधको फलस्वरूप म मानिसहरूले मेरो सर्वशक्तिमान्‌ता, मेरो व्यक्तित्वको महिमा हेरेको देख्न चाहन्छु। (यी सबै कुराहरू ज्येष्ठ पुत्रहरूमा प्रकटीकरण हुन्छन्; यो एकदमै सत्य हो। यसबाहेक, कोही पनि मेरो व्यक्तित्वको हिस्सा बन्न सक्दैन; यो मबाट आदेश भएको हो।) मेरो घरमा, मानिसहरूले ठम्याउन नसक्ने अन्त्यहीन रहस्यहरू छन्। जब म बोल्छु, मानिसहरूले म एकदमै दयाहीन छु भनेर भन्छन्। तिनीहरूले धेरै मानिसहरूले मलाई पहिलेदेखि नै निश्चित हदसम्म प्रेम गर्छन् भनेर भन्छन्। त्यसोभए, म तिनीहरू ठूलो रातो अजिङ्गरको सन्ततिहरू हुन् भनेर किन औँल्याउँछु त? साथै, म तिनीहरूलाई किन एक-एक गर्दै परित्याग गर्नेछु? के मेरो घरमा धेरै मानिसहरू हुनु राम्रो होइन त? तर पनि, म यही तरिकाले काम गरिरहन्छु। मैले पूर्वनियुक्त गरेको सङ्ख्याभन्दा एक अङ्क पनि तलमाथि हुनेछैन। (यो मेरो प्रशासनिक आदेश हो। यो कुनै मानवले परिवर्तन गर्न नसक्ने मात्रै होइन, तर म आफैले पनि यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दिन, किनकी मैले शैतानको अगाडि हार मान्नु हुँदैन। मेरो बुद्धि र प्रतापलाई प्रमाणित गर्न यो नै पर्याप्त छ। म परमेश्‍वर स्वयम् हुँ। मानव मेरो अगाडि झुक्छन्; म मानवको अगाडि झुक्दिन।) शैतानलाई सबैभन्दा बढी अपमानित बनाउने कुरा ठ्याक्कै यही हो। मैले छनौट गरेका सबै विनम्र, समर्पित, आज्ञाकारी, र इमानदार छन्, र तिनीहरूले विनम्रतापूर्वक र गहन भएर मेरो सेवा गर्न सक्छन्। (यो तथ्यलाई प्रयोग गरेर शैतानले मेरो अपमान गर्न चाहेको थियो, तर मैले शैतानलाई पराजित गरिदिएँ।) यी मानिसहरूमा, मेरो स्वभाव देख्न सकिन्छ। युद्धमा विजयी भएर फर्किएपछि, म मेरो ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई मेरो राज्यको राजा बन्नका लागि अभिषेक गर्नेछु, र त्यसपछि मात्रै म विश्राम गर्न थाल्नेछु, किनभने तिनीहरूले राजाको रूपमा मसँगै शासन गर्नेछन्। मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूले मेरो प्रतिनिधित्व गर्छन्, तिनीहरूले मलाई व्यक्त गर्छन्। तिनीहरूको विनम्र र गहन सेवामा, तिनीहरू मप्रति समर्पित हुन्छन्; तिनीहरूको इमानदारीतामा, तिनीहरू मेरा वचनहरूको पालना गर्छन्; तिनीहरूको इमानदारीतामा, तिनीहरूले म जे भन्छु, त्यही गर्छन्; र तिनीहरूको विनम्रतामा, तिनीहरूले मेरो नाममा महिमा ल्याउँछन् (धृष्टता वा अशिष्टतामा होइन, तर प्रताप र क्रोधका साथ)। मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू! ब्रह्माण्ड संसारलाई न्याय गर्ने समय आएको छ! म तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छु, म तिमीहरूलाई अख्तियार दिन्छु, र म तिमीहरूलाई आशिषहरूको हिस्सा दिन्छु! सबै कुरा पहिले नै पूरा गरिएको छ, र यो सबै तिमीहरूबाट नियन्त्रित र प्रबन्ध गरिएको छ, किनकी म तिमीहरूको पिता हुँ; म तिमीहरूको दरिलो धरहरा हुँ, म तिमीहरूको वासस्थान हुँ, र म तिमीहरूको समर्थक हुँ। साथै, म तिमीहरूको सर्वशक्तिमान् हुँ; म तिमीहरूको सबै थोक हुँ! यावत् थोक मेरो हातमा छ, र यावत् थोक तिमीहरूको हातमा पनि छ। यसमा आज मात्रै होइन, बरु हिजो पनि, र भोलि समेत पर्छ! के यो उत्सव मनाउन लायक छैन? के यो तिमीहरूले हर्षबढाइँको लायक छैन? तिमीहरू सबैले, तिमीहरूको हकको भाग मबाट स्वीकार गर! आफ्ना लागि अलिकति पनि नराखी म तिमीहरूलाई मसँग भएको सबै कुरा दिन्छु, किनभने मेरो सबै सम्पत्ति तिमीहरूको हो, र मेरा धनहरू तिमीहरूमै छ। त्यसैले त तिमीहरूको सृष्टि गरेपछि मैले “यो एकदमै असल छ” भनी भनेँ।
तिमीहरूले आज गर्ने काम, सोचाइ, र बोलीमा तिमीहरूलाई कसले निर्देशित गर्छ भनेर के तिमीहरूलाई थाहा छ? तिमीहरूका कार्य पछाडिको उद्देश्य के हो? म तिमीहरूलाई सोध्छु: तिमीहरूले थुमाको विवाहको भोजमा कसरी उपस्थिति जनाउँछौ? के त्यो आज हो? वा त्यो भविष्यमा छ? थुमाको विवाहको भोज भनेको के हो? तिमीहरूलाई थाहा छैन, होइन त? त्यसोभए, म तिमीहरूका लागि व्याख्या गर्नेछु: जब म मानवको क्षेत्रमा आएँ, मैले म आज भएको मानवको सेवा गर्नका लागि सबै प्रकारका मानिस, वस्तु, र थोकहरूलाई मिलाएको थिएँ। अब सबै कुरा पूरा भएको छ, त्यसैले म सेवाकर्ताहरूलाई पाखा लगाउँदैछु। विवाहको भोजसँग यसको के सम्बन्ध छ? जब यी मानिसहरूले मलाई सेवा गर्छन्—अर्थात्, जब म थुमा बनाइन्छु—मैले विवाहको भोजको स्वादको अनुभव गर्छु। अर्को शब्दमा, मैले भोगेको सबै पीडा, मैले गरेका सबै कामहरू, मैले बोलेका सबै कुरा, मैले भेटेका सबै मानिसहरू, र मैले मेरो जीवनकालमा गरेका सबै कुराहरूले नै विवाहको भोजको निर्माण गर्छन्। म भएको मानवको रूपमा मेरो अभिषेक भएपछि, तिमीहरूले मलाई पछ्याउन थाल्यौ (र त्यस बेला म थुमा बनेँ); तसर्थ, मेरो नेतृत्वमा, तिमीहरूले सबै प्रकारका पीडा र विपत्तिको अनुभव गर्यौ, संसारबाट त्यागियौ र तिरस्कृत भयौ, परिवारबाट त्यागियौ, र मेरो आशीर्वादमा जिएका छौ। यी सबै कुराहरू थुमाको विवाहको भोजका हिस्सा हुन्। मैले “विवाहको भोज” को प्रयोग गरेँ किनभने मैले तिमीहरूलाई गर्न लगाउने सबै कुरा तिमीहरूलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि हो। तर, यो सबै भोजको हिस्सा हो। भविष्यमा—वा, यसरी पनि भन्न सकिन्छ, आज—तिमीहरूले आनन्द उठाउने सबै कुरा, तिमीहरूले प्राप्त गर्ने यावत् थोक, र तिमीहरूले मसँग साझे रूपमा प्राप्त गर्ने सबै राजकीय शक्ति भोजको हिस्सा हो। मलाई प्रेम गर्नेहरू सबैमा मेरो प्रेम आउँछ। मैले प्रेम गर्नेहरू सदैव रहिरहनेछन्, कहिल्यै पनि हटाइनेछैनन्, र अनन्तसम्म मेरो प्रेमभित्र हुनेछन्। यो सधैँका लागि हो।
अघिल्लो: अध्याय १०८
अर्को: अध्याय ११०